Isimada Sool oo sheegay in rabitaanka shacabka khaatumo ay muhiim tahay in la tixgeliyo (Dhegeyso) – Radio Daljir
Diseembar 10, 2013 3:15 b 0
Boocame, December 10, 2013 – Ugaas Cabdullaahi Ciise oo ka mid ah isimada gobollka Sool ee ku sugan degmada Boocame, ayaa ka hadlay arrimo badan oo ay ka mid tahay xasiloonida gobolka iyo weliba siyaasadda la xiriirta qadiyada Khaatumo iyo tan dowladda Puntland.
Waxaa uu xusay Ugaas Cabdullaahi Ciise in dadka degan? gobollada Sool iyo Cayn ay dhisteen maamul la yiraahdo Khaatumo, kaas oo ah mid heshiis lagu yahay oo dadku ku qanacsan yahay.
?Khaatumo ayaa dadku dhisteen, Puntland waa hooyadii dhulkan dadkan ayaa ah reer Puntland, laakiin haddana maamulka Khaatumo waa mid nabadeed, mar kasta waxaa muhiim ah rabitaanka dadka gobolka.? Ayuu yiri Ugaas Ciise
Ugaas Cabdullaahi oo u waramayey radio daljir, waxaa uu sheegay in ay muhiim tahay in laga shaqeeyo xasiloonida iyo in aan dhibaato dhicin, ?waxaa la rabaa waa wada shaqayn iyo is-dhexgal waa labba maamul oo walaalo ah oo deris ah, taas ayaa mudan in la tix-geliyo mar kasta.?
Ugaaska ayaa ku baaqay wada-hadal iyo la dhameeyo wixii khaldan.
Dhowaan gobolka Sool gaar ahaan degmada Taleex waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyey dhinacyo is diidan, dagaalkaas ayaa waxaa ku dhintay dad badan oo ay ku jireen rayid iyo dhinacyadii dagaalamay, waxaana in badan canbaarayn hawada isu mariyey dhinacyadii dagaalamay.
Dhegeyso: – Jamaal Faarax oo Boocame tegay ayaa waraystay Ugaas Cabdulaahi Ciise?